Ukudibana kweNkampani yeSeychelles Inkampani yaselwandle e-Switzerland
IRiphabhlikhi yaseSeychelles, liqela leziqithi ezili-115 ezikwiLwandlekazi lwaseIndiya, kumantla mpuma eMadagascar. IVictoria, inkulu-dolophu, ekuphela kwesona sixeko sikwezi ziqithi kwaye kuhlala isithathu sabemi.
Irhafu ebekho phakathi kuLwandlekazi lwaseIndiya
Ulawulo lwerhafu elinikezelayo Ukusebenza ngokungaphaya kwebhankiirejista ye iinkampani ezingaselwandle o IBC, ubhaliso lweengxowa-mali zotyalo-mali kunye neenkampani zeinshurensi kunye nobhaliso lweenqanawa.
Yiyo kwerhafu isetyenziswa ziinkampani ezininzi kunye nabantu abathile. Imithetho yaseSeychelles inika ukhuseleko lweeasethi, ukuncitshiswa kwerhafu kunye noxanduva lwerhafu, imfihlo kunye nokugcinwa kwemfihlo.
Ukusuka Ukunyanzelwa kweSwitzerland, abacebisi abazimeleyo nabamabhanki babucala bamazwe aphesheya, silawula umgaqo-siseko we Inkampani elunxwemeni eseSeychelles kunye nokuvulwa kwe iakhawunti ezona zilungele iimfuno zakho. Sinezi nkonzo kwimimandla engaphezu kwama-40 kumazwekazi amahlanu.
Kusemthethweni na ukuba nenkampani engaselwandle eSeychelles?
yenza a Inkampani elunxwemeni eseSeychelles Kusemthethweni. Kuya kubakho ukuchasana nomthetho xa umnini wale nkampani engazalisekisi uxanduva lwerhafu kwilizwe lakhe kwaye engachazanga iimpahla anazo phesheya. Ukuba unemibuzo malunga noku, nceda qhagamshelana nathi.
Inkqubo yokwenza Inkampani eSeychelles ifuna umsebenzi weengcali ebaleni kunye neengcebiso ezifanelekileyo ukuze ungaweli kwizitenxo. Nge Ukunyanzelwa kweSwitzerland, Abacebisi bezimali bamazwe aphesheya nabazimeleyo, unokuseta inkampani yakho engaselunxwemeni ngeakhawunti yebhanki ukusuka kwindudu yekhaya lakho, enkosi kuthi umgaqo-siseko weenkampani ezingaselwandle kumgama, ongayi kuba nexhala malunga nento.
Izibonelelo zokwenza inkampani engaselunxwemeni eSeychelles
Umda ozimeleyo kwaye ungadibananga ne-EU, lulawulo olunandipha uzinzo kwezopolitiko kunye noqoqosho kunye nokuhlonela okwaziwayo.
Inomthetho ogqibeleleyo kunye nowangoku. Ayina mvumelwano yolwazi lokutshintshiselana ngerhafu.
Irhafu efanelekileyo. Iinkampani ezingaselwandle eSeychelles ezenza umsebenzi wazo ngaphandle kwesiqithi azihlawulisi rhafu.
Isayine izivumelwano ezininzi zokuphepha ukurhafiswa kabini kunye namazwe aliqela, kubandakanya: I-China, I-Cyprus, I-United Arab Emirates kunye neMonaco.
Lulawulo olwaneleyo ngenani elikhulu lemisebenzi, ngakumbi kurhwebo lwamanye amazwe.
Lelinye lawula mmandla ambalwa okuvumela ukusetyenziswa kwezabelo zangaphambi kokuba zijikeleze ngokukhululekileyo.
Lulawulo olufanelekileyo kwabo bafuna inqanaba eliphezulu labucala, ukungaziwa kunye nokugcinwa kwemfihlo ngexabiso eliphantsi.
Ii-IBCs ziimoto eziguqukayo zorhwebo okanye zotyalo-mali kwinqanaba elincinci okanye eliphakathi.
Ngaba loluphi uhlobo lwebhanki yabucala eSeychelles?